'Jackass Forever' Trailer wuxuu keenayaa maan la'aan aan badnayn - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Jackass Forever' Trailer wuxuu keenayaa maan la'aan aan badnayn
Uma maleyneynin inaan dhahayo waligey… laakiin Jackass iyo raga ka kooban Jackass soo noqonayaan! Markan waa gudaha Jackass Weligiis.
Dulucda sheekada Jackass Weligiis waxay u dhacdaa sidan:
U dabaaldegaya farxadda la soo noqoshada asxaabtaada ugu fiican iyo toogasho si dhammaystiran loogu fuliyay dingdong, shaqaalihii asalka ahaa ee jackass ayaa ku soo laabtay wareeg kale oo qosol badan, macno darro ah, iyo badiyaa bandhigyo qatar ah oo majaajillo ah iyadoo caawimaad yar laga helay qaar ka mid ah jilayaasha cusub ee xiisaha leh. Johnny iyo kooxdu waxay baqshadda ku sii riixayaan xitaa Oktoobar 22 iyagoo ku jira jackass weligood.
Ma hubo sida Johnny Knoxville iyo shaqaaluhu aysan dhammaantood ilaa hadda u burburin. Waxaan ula jeedaa, waalida jireed ee jirkooda la mariyey waa mid aad u weyn. Ku dar in ay iyaguna sannado badan qabanayeen. Waxay u muuqataa inaysan iyagana fududayn. Waxaan ula jeedaa, haddii aad fiiriso qaybta gawaarida marka Knoxville dibi dhan u qaado laabta iyo qoorta, waa inaad isweydiisaa siduu weli u nool yahay sax?
Waa wax lagu farxo, waa carrab la 'oo nimankani waxay ku caddeeyeen jidkooda qayb weyn oo ka mid ah dhaqanka muusigga iyo nolosheenna… halkii aannu ka jeclaannay ama ahayn.
Miyaad ku faraxsan tahay inaad iska bixiso Jackass Weligiis Oktoobar 22? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Agaasimaha 'Street Street' wuxuu hayaa fikrado waaweyn oo ku saabsan sida loo ballaariyo rukhsadda. Halkan ka akhriso.